Khilaaf ka dhashay Imtixaanaadkii qishka ahaa ee ardayda ay heleen oo Muqdisho ka taagan – XAMAR POST
Khilaaf ka dhashay Imtixaanaadkii qishka ahaa ee ardayda ay heleen oo Muqdisho ka taagan
Khilaaf ka dhashay helitaanka Qishka Imtixaanaadkii ay galeen Ardayda Dugsiga Sare ee Dallada Waxbarashada FPENS, ayaa ka dhex taagan masuuliyadda daladaasi.
Warar aan helnay ayaa sheegaya xubnaha Sare ee Guddiga Dalladda FPENS oo tiradooda ay gaareyso 14 xubnood inay isku khilaafsan yihiin arrinta la xiriirta imtixaanaadka sida ay ardayda ku heleen iyo khasaarihii soo gaaray Iskuulaad dallada ka tirsan oo Ardayda ay ka jajabiyeen agabkii waxbarashada.
Masuuliyiin Dalladan ka tirsan ayaa sheegay in shaqada laga eryay xubno ka tirsan dallada oo sanado badan ka shaqeynaayay, taasi oo keentay kala aragti duwanaanshaha madaxda dalladda ee ku saabsan falka shaqada looga buriyay xubnahan.
Dadka shaqada laga cayriyay ayaa lagu eedeynayaa inay door ku lahaayeen bixinta qishka imtixaanaadkii ay galeen ardayda, inkastoo dallada Waxbarashada FPENS ay ku fadeexowday arrintaan, haddana ma jirto meel si cad ay uga hadleen oo ay ku faah faahiyeen sida ardayda ay ku heleen qishka Imtixaanaadka.
Illaa saddex mar ayaa la sheegay in la bedelay maadooyin ka mid ah Imtixaankii ay galeen ardayda, taasi oo maalin maalmaha ka mid ah ardayda ay caroodeen, kadibna ay bur buriyeen qalabkii waxbarashada ee yiilay Iskuulaad dallada ka tirsan oo Degmada Dharkiinley ku yaalla.
Xubnaha qaar ee Dallada Waxbarashada FPENS ka tirsan, ayaa soo jeediyay in dallada ay bixiso qalabkii ka bur buray Iskuulaadkaasi, maadaama caro ka dhalatay Imtixaanka oo la hakiyay sabab ay u noqotay arrintaasi.
Baraha Bulshada ay ku wada xiriiraan ayaa lagu arkaayay maadooyin ka mid ah kuwii ay imtixaanka ku galeen ardayda oo la isku dhaafsanaayo halkaasi, islamarkaana taasi fadeexad wayn ay ku noqotay dallada Waxbarashada FPENS oo sanado badan ka shaqeynaysay dhanka horumarinta waxbarashada Somaliya.
Al-Shabaab oo madaafiic ku gaaracay saldhigga Milateri ee Turkiga
AKHRISO: Qodobadda looga hadlaayo Kulanka Xildhibaanada Golaha Shacabka